Izindaba - Insizakalo eyenziwe ngezifiso, isipiliyoni sobungcweti nesicebile
Muva nje, iWuxi Innovate Machinery Development Co, Ltd. Iqedile ukukhiqizwa kwemigqa yokukhiqiza i-gel kanye ne-emulsion yeYangzhou Runlian Medical Equipment Co, Ltd. kanye nolayini kanye nolayini wokukhiqiza okhilimu weHunan Zhongxinkang Medical Equipment Co, Ltd. Yonke ulayini we-prodction wonke ususwe iphutha. Yanikezwa ngokusemthethweni ikhasimende ngo-Okthoba, futhi umsebenzisi wayifaka ngokusemthethweni ekukhiqizeni.
Izici ezijwayelekile zalawa manyunithi amabili zinamandla amakhulu, okuhlukahlukene kanye nesikhala esincane. Ngokuya ngesimo somsebenzisi, onjiniyela bethu baklame uhlelo oluphelele kusuka ekucabangeni okuphelele kwemisebenzi, izindleko, ukwakheka, ukusebenza, ukuthuthwa, nokungena. Inqubo yonke yokusebenza ilula futhi iyashelela, futhi imikhiqizo enhlobonhlobo ingakhiqizwa ku-emulsifier yethu esebenza ngemisebenzi eminingi ukukhiqiza imikhiqizo esezingeni eliphakeme, exazulula izinkinga zamakhasimende futhi ihlangabezane ngokuphelele nezidingo zamakhasimende. Abasebenzisi bagcwele ukuncoma inkampani yethu.
Futhi kulo nyaka, ngenxa yalolu bhubhane, ukufunwa ezimakethe zakwamanye amazwe kwehlile, kodwa sasisathola imiyalo evela kumakhasimende lapho ubhadane lwalulubi kakhulu. I-oda laseBangladesh laqedwa ngomhlaka 8 Okthoba. Leli khasimende eBangladesh lingumkhiqizi wedayi wezinwele. Ngemuva kokuhlanza, okuqukethwe oksijini embizeni kudinga ukukalwa. I-nitrogen idinga ukugcwaliswa ngesikhathi senqubo yokukhiqiza. Kudingeka imishini yokuhlanza i-nitrogen. Onjiniyela bethu baklama umshini ngokusho kwekhasimende'Izidingo futhi zisuse isidingo semishini yokuhlanza i-nitrogen. Siphinde sibanikeze amavidiyo wokufaka anemininingwane nokusekelwa kobuchwepheshe. Amakhasimende anelisekile kakhulu ngemishini nezinsizakalo zethu futhi asefinyelele ekubambisaneni kwesikhathi eside.
I-Wuxi Innovate Machinery Development Co, Ltd. ibigxile kwimishini yezimboni iminyaka engaphezu kweyishumi. Inqwabelene nesipiliyoni esicebile ekukhiqizeni ukhilimu, into yokugcoba nemishini yokugcoba. Ubuchwepheshe buvuthiwe futhi buphelele. Idizayini ngayinye ingahle yenzelwe abasebenzisi. Amakhasimende ahlinzeka ngemishini esezingeni eliphakeme ngenkathi eklama izixazululo zomugqa wokukhiqiza osebenzayo wamakhasimende ukonga izindleko nokwenza ngcono ukusebenza kahle.